Mayelana NATHI - Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd.
Umshini ojwayelekile wokusika we-fiber laser
Umshini wokusika u-fiber laser ohlanganiswe ngokuphelele
Umshini wokusika we-Tube & Sheet Fibre Laser
Umshini wokusika we-Tube Fibre Laser
Idisktype umshini wokusika we-plasma cnc
Uhlobo lwe-Gantry cnc cutting machine
Umshini wokusika we-gantry plasma flame cnc
Umshini wokusika we-plasma wokunciphisa i-plasma
Umshini wokusika we-flame cnc oqondile we-gantry
Ipuleti lepayipi le-Gantry lihlanganiswe umshini wokusika we-plasma flame cnc
Umshini We-Flasme Flasme Flame Wokusongela Omkhulu we-CNC
I-Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. Inkampani ixhunyaniswe ne-Shandong Jubangyuan Machinery Group.Ikhethekile kumshini wokusika we-Plasma Plasma, umshini wokusika ilangabi we-CNC, imishini yokusika i-Laser, imishini ye-Welding, uhlelo lwe-CNC kanye nezinto ezisebenzayo zocwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa Inkampani yeqembu ibhizinisi lebuchwepheshe obuphakeme elineminyaka engama-24 yolwazi lokukhiqiza ngomshini. Inethimba le-R&D eliqeqeshiwe futhi ithole amalungelo obunikazi angama-25 agunyaziwe kuzwelonke.
Le nkampani isidlulise ukuqinisekiswa kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-IS09001. Ngokuya ngezidingo zohlelo lokuphathwa kwezemvelo lwe-IS014001, ilawula ngokuqinile zonke izici zezinto zokwenziwa ezingavuthiwe, ukucutshungulwa, umshini nokuhanjiswa kwempahla ukuqinisekisa ukusebenza nekhwalithi yemikhiqizo .Imikhiqizo eminingi iyaqinisekiswa.
I-Buluoer Intelligent inezindawo zokuthengisa eziphelele nezitolo zangemva kokuthengisa embonini, futhi isethe umnyango okhethekile wokuhlinzeka ngezinsizakalo ukuhlinzeka ngenqubo yokuhlaziya kanye nokusika okuphelele kwe-laser, ukusika kwe-plasma fire, izixazululo zesicelo se-welding ezenzakalelayo kanye nokwenza ngokwezifiso okungejwayelekile kumakhasimende ahlukile.
I-Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd isebenzisa imishini yokusika i-laser, imishini yokusika i-plasma, umshini wokusika amapayipi wensimbi, imishini yokufaka insimbi, isistimu ye-CNC nezinto ezisebenzayo i-R&D, ukuklama, ukwenza, ukuthengisa kanye nesevisi.Ngumholi wezomnotho waseChina? Umshini wokusika we-CNC. Kuyibhizinisi "elikhethekile nelisha" eJinan.
Imikhiqizo yenkampani inamalungelo amaningi ezimele empahla yengqondo, amalungelo obunikazi amaningi wobuchwepheshe nelungelo lobunikazi be-software. Imikhiqizo isidlulile isitifiketi sekhwalithi ye-ISO 9001 futhi ithengiswa kahle ekhaya naphesheya. Bayanconywa abasebenzisi basekhaya nabangaphandle ngemikhiqizo yabo eyonga futhi esebenzayo, ukusebenza okulula nokunokwethenjelwa. Le nkampani izokunikeza ngezixazululo ezinokwenzeka zokusikwa kwezinombolo ezisuselwa kumoya wokuziqambela owenziwe ngokuqhamuka nomqondo wokuziphatha. Dala ubuhle ndawonye.
Umshini wokusika okulawula imishini we-desktop
Umshini wokulawula umshini wokusika we-Gantry
Umshini wokusika we-CNC wokusika we-Gantry Tube Plate
Umshini wokusika we-CNC we-Gantry Slab
Sizozama ukusiza ukukunikeza ikhambi lethu elihamba phambili kuwe.
Umshini wokuqopha we-laser we-las2
Isimo:No. 666 Fengnian Av., IMingshui Economic Zone, Zhangqiu District, Jinan City, Shandong, China